ကားဈေးကွက် နှင့် မြန်မာပြည် | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဗေဒင်အချုပ် မဟာဘုတ်
၉ ဂဏန်း နှင့် နာမည်ကျော်ကြားသူများ »
ကားဈေးကွက် နှင့် မြန်မာပြည်Published February 20, 2010 | By dr.tin bo bo	မနေ့က အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အခုရက်ပိုင်း သူ ကားဝယ်ရင် ကောင်းပါ့မလားလို့ မေးလာပါတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းမျိုးဟာ (အရေးကြီး တဲ့မေးခွန်းလို့) ယူဆမိတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ချက်ခြင်း ပြန်ဖြေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ “အခုရက်ပိုင်း မ၀ယ်ပါနဲ့ဦး” သင်္ကြန်ပြီးအောင် ခေတ္တစောင့်ကြည့်ပါဦး . . လို့ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဒီကိစ္စလေးကို ကိုယ့်စာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေထဲက ကားနဲ့ ပတ်သက် နေသူတွေအတွက် လည်း အကျိုးရှိကောင်း ရှိမလားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။
Posted in မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, Horary Astrology, hura veda, mahabote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, သင်္ချာဗေဒ, ဟူးရားဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	9 comments on “ကားဈေးကွက် နှင့် မြန်မာပြည်”	YoungGun on February 20, 2010 at 11:21 pm said:
ယာဉ်ကာရက သောကြာဂြိုဟ် အတ္တဖြစ်နေပြီး အင်္ဂါ အမြင်ယှဉ် ခံနေရချိန်မှာ တိုယိုတာကားတွေ ရှော့်ခ် ဖြစ်ပြီး ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ရှေ့မှောက် နာကြားရမယ့် ကိန်းအဖြစ် တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒါက အပေါ်ယံအမြင်သာ ဖြစ်ပြီး အခု ဆရာ့ဆောင်းပါးနဲ့တော့ ပက်သက်နှီးနွယ်မှု မရှိပါဘူး။ မြေဈေးကောင်းမယ်ဆိုလို့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့် လေ့လာမိကြောင်းပါဗျား။
dr.tin bo bo on February 21, 2010 at 8:59 am said:
ကြည့်ရတာ ရန်းလေး မြေ၀ယ်ထားတယ် ထင်တယ်။ မြေဈေးကတော့ ၂၀၁၀ အကုန် ၂၀၁၁ အကူးလောက်မှ ထင်ရှားသိသာစွာ တက်လိမ့်မယ်။
red rose on February 21, 2010 at 9:55 am said:
ဆရာပြောတာ အမှန်တွေဘဲလေ… ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကားဈေး အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်က မြန်မာပြည်ပါဘဲ..သူများတိုင်းပြည်တွေမှာက ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ကားဖြစ်ပါစေ…သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းဘဲရှိကြတယ်…မာစီဒီ:ကအစ အော်ဒီ အဆုံး လမ်းဘေးတွေမှာ ဖြစ်သလို ရပ်ထားကြတာ…ဒီမှာက အကြွေး ၀ယ်လို့လည်း ရနေတော့…အော်ဒီဝယ်စီးချင်စိတ်ပေါက်တယ်…အော်ဒီ ကို ကြိုက်လို့ မဟုတ်သလို ပိုက်ဆံရှိလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး…စိတ်အချဉ်ပေါက်လို့ပါ…မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ ဂျစ်စုတ်တောင် ၀ယ်ဘို့ မနည်းကြိုးစားရမှာပါ…
saiaung on February 21, 2010 at 12:25 pm said:
နိုင်ငံခြားကကားသွင် မယ်ဆို ရင်ကောအဆင်ပြေနိုင်မလာဆရာ
dr.tin bo bo on February 21, 2010 at 12:37 pm said:
နိုင်ငံခြားက ကားသွင်းမယ်ဆိုရင် လက်ရှိပေါက်ဈေးထက် ဘယ်လောက်အထိ အကျခံနိုင်သလဲ ဆိုတာ တွက်ကြည့်ပါ။ ဈေးကတော့ ကျဦးမယ်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် ဈေးကွာလွန်းသေးရင် ခဏ စောင့်ကြည့်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
mon on February 21, 2010 at 3:40 pm said:
ကိုမြင့်ဦး on February 23, 2010 at 11:35 am said:
ကျေးဇူးပဲ ….ကိုဘိုရေ .
ကျွန်တော်ရဲ့ မြေကွက်လေး ဒီအတိုင်းထားလိုက်တော့မယ်………..
ကိုဇေ on February 23, 2010 at 12:46 pm said:
ဆရာအကြံညဏ်ပေးချက်အရ ကျနော် မ၀ယ်ဖြစ်ပါ
10 Feb 2010 ကားဈေး (သိန်း)
PUBLICA 1981 =၆၅
Super saloon 1986/87(လ၊သ၊အ)= ၁၅၀
Super saloon 1990 (၃က၊၄က) = ၂၁၀
Limited 1988 (၃က၊၄က)= ၂၂၀
17 Feb 2010 ကားဈေး (သိန်း)
PUBLICA 1981= ၅၅
Super saloon 1986/87(လ၊သ၊အ)= ၁၄၀
အောင်မော် on May 20, 2010 at 11:15 am said:
အခု ဆရာ့ရဲ့မှန်းချက်ကိုကြည့်တွေ့ရတော့ နဲနဲတွန့်သွားပြီ…
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,636)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,354)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,018)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,047)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,357)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,183)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,698)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,735)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,395)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,152)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,401)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,034)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,746)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,742)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,773)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,152)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,098)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,043)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !